Comfort Apartment. Uzozizwa usekhaya. - I-Airbnb
Comfort Apartment. Uzozizwa usekhaya.
Itholakala esitezi esiphansi, iqukethe ihholo lokungena-ikhishi-igumbi lokudlela, igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabili nombhede owodwa owodwa, isimo somoya esithule kakhulu nesisebenza kahle sohlobo lwe-Split, ifeni yodonga elawulwa kude, igumbi lokugezela elinamanzi ashisayo nabandayo, ephephile, TV, isiqandisi, microwave, igesi isitofu. Ithafa elinezimila eziluhlaza.
I-Comfort Apartment yakhiwe ophikweni lwesokudla lwesakhiwo (Hostal Casa Confort), esitezi esiphansi, inehholo lokungena-ikhishi-igumbi lokudlela, igumbi lokulala elinemibhede emibili nombhede owodwa, umoya othule kakhulu futhi osebenza kahle wohlobo lwe-Split. conditioning, yokugezela ngamanzi ashisayo nabandayo, imoto, ephephile, udonga fan nge elawulwa kude, ikhishi sikuhlomele ngokuphelele, isiqandisi, i-TV ngaphakathi egumbini, stereo, microwave. Ilungele abakhubazekile.
Izivakashi zingajabulela ithala, elihlotshiswe ngezitshalo eziningi, ukusuka lapho ungabona ihhotela elithi "Meliá Santiago de Cuba" nesonto kusukela ekuqaleni kwekhulu leminyaka (Iglesia Bautista "El Salvador"), kanye neMoncada Barracks. Le thala ifanelekile ukuphumula, ukuphumula, ukushaywa umoya kanye nobhiya noma i-rum yaseCuban noma usebenzise i-grill, udle emoyeni ovulekile futhi ubuke ukushona kwelanga. Siphakela isidlo sasekuseni nesakusihlwa lapho.
Ama-Carnivals abanjwa ngoJulayi, lona ungomunye wemigwaqo ekhethelwe lo mcimbi, ongawubona kahle usuka ethafeni.
Ukuthatha indawo esikhumulweni sezindiza, umhlahlandlela wabavakashi, amakilasi okudansa, umpheki wasekhaya, isevisi yokuwasha, ibhulakufesi ozikhethela lona, isidlo sasemini nedina. Enkabeni yendawo kukhona igaraji lemoto encane-ephakathi, mahhala izivakashi, kungenzeka elinye igaraji eliseduze.
Uma uthanda, unganikezwa umakhalekhukhwini onolayini waseCuba ozowusebenzisa.
Sinikeza ukunakwa kwamahora angama-24 kanye nesiqondiso mayelana neziza zezivakashi nemisebenzi edolobheni lethu nanoma yiluphi olunye ulwazi oludingayo.
Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho, uphinde uvakashele futhi usincome, siyabonga.
Itholakala endaweni ye-"Sueño", enye yezindawo ezithule kakhulu nemaphakathi e-Santiago de Cuba, 5 min. uhamba usuka ehhotela iMeliá Santiago de Cuba, iMaison nePlaza Ferreiro, uye kwenye indawo kanye nemizuzu eyi-10, iPlaza de Marte neParque Céspedes. Indawo esihlala kuyo iyiphaseji eliyimpoqo ukuya nokubuya enkabeni yedolobha.
Kufanelekile ukuvakashela isikhungo esimatasa emini futhi uphumule ngokuthula ebusuku, ngaphandle komsindo.
Médico de profesión, he vivido fuera de cuba durante 18 años(Argentina, España)regresé hace uno(2015) para dirigir Casa Confort. Me encanta mi país, el clima, la gente, la alegría…
Sithemba ukuthi uzoku…